Afka Soomaaliga iyo isbeddelka waayaha - WardheerNews
W/Q Farad Sharmaarke
Taas micnaheedu maaha in uu jiro af isagu isaga filan dhan kasta oo aan afafka kale waxba kasoo qaadan, ee waa in ereyada iyo adeegsiga sahlanba ay aasaas iyo sal u noqdaan ereyo aan lasoo amaahan.
Sancada iyo teknolojiyada cusubi waxay keentaa ereyo iyo halheysyo aan horay loo maqal, amaba haddii horay loo maqlay macne kale loo adeegsado, tusaale ahaan ereyga computer qarni ka hor waxa loola jeeday iyo waxa aynu haatan u garaneyno waa kala duwan yihiin.
Si taa la mid ah waxa iyana jirtay adeegsiga ereyo badan oo adeegsigoodu yaraan lahaa amaba ku ekaan lahaa degaan gaar ah amaba gobol gaar ah oo lagu daray manhajkii waxbarasho ee dalka, noqdayna erey bixin hirgashay sida walax, cuf, iwm.
Sagaashameeyadii kaddib waxa yimid howlo cusub siiba teknolojiyadii oo sii fidday gaartayna meel kasta loona adeegsaday wax kasta, nasiib darrose waxaa xilligaa ay Soomaalidu ku jirtay burbur baahay, afkii Soomaaliguna qayb ayuu ka noqday burburkaas oo waxa lumay tixraacii iyo halkii laga hagi lahaa oo ay ugu horreeyaan idaacadaha iyo qoraallada. Si gaar ah tixraac la’aantaas waxa looga dareemi karaa teknolojiyada iyo waxii la xiriira.